1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည် diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်
ဤ 1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်တွင် InGaAs ပါ ၀ င်သော Monitor photodiode နှင့်၎င်း၏အထုပ်အတွင်းရှိပေါင်းစပ်ထားသည့် optical isolator တစ်ခုပါရှိသည်။ ဒီလေဆာရောင်ခြည် diode သည်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် CATV စနစ်များကဲ့သို့သော optical networks တွင်အသုံးချနိုင်သည်။
1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
1350nm Coaxial DFB Pigtail laser diode ၏နိဒါန်း
1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
4. 1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုခြင်း
1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1340 1350 1360 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၃၅၀nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်
၇။ ၁၃၅၀nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာဒိုင်၏ပို့လွှတ်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1350nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော